Ny LinkedIn dia manitatra ny fiasan'ny pejin'ny orinasa | Martech Zone
Talata, Novambra 13, 2018 Talata, Febroary 9, 2021 Douglas Karr
Na dia nandao pejy maro aza ny Facebook hahazoana ny zava-kendrena voajanahary, hita fa manararaotra manampy ny orinasa hifehy ny fiaraha-miasa ara-tsosialy miaraka amin'ny fanampin'ireo endrika vaovao lehibe ao amin'ny pejin'ny mombamomba ny LinkedIn.
Ny vondrom-piarahamonina no fototry ny fahombiazan'ny orinasa tsirairay. Ny mpiasa, ny mpiara-miombon'antoka, ny mpanjifa ary ny mpilatsaka hofidina dia ahitàna vondrom-piarahamonina iray ary miaraka dia afaka manampy amin'ny fampandehanana ny fitomboan'ny orinasanao amin'ny alàlan'ny resaka misy dikany. Sparsh Agarwal, Product Lead, Pejy LinkedIn
Androany, nanambara ny pejy LinkedIn ny LinkedIn - ny taranaka mandimby an'i Pejy Orinasa LinkedIn. Ny pejy dia namboarina hatrany ifotony mba hanamorana ny marika, andrim-panjakana ary fikambanana, manomboka amin'ny orinasa madinidinika ka hatramin'ny orinasa lehibe, hampiroborobo ny resadresaka mahasoa amin'ny fiarahamonina LinkedIn misy mpikambana 590 tapitrisa mahery.
LinkedIn dia mamoaka lahatsoratra, horonan-tsary ary lahatsoratra maherin'ny 2 tapitrisa ao anaty fahana isan'andro, ary mitombo ireo fifandraisana ireo. Ny traikefan'izy ireo pejy vaovao dia natsangana mba hampiroborobo ireo vondrom-piarahamonina mavitrika sy resaka ao amin'ny LinkedIn miaraka amin'ny mpiasan'ny orinasa iray, ny mpanjifa, sy mpanaraka.
Natao ny pejy hanampiana ireo fikambanana hifandray amin'ny mpikambana marina, hampitombo ny orinasany ary hanangana fifandraisana maharitra. Mba hahatratrarana izany tanjona izany, ny pejy dia aorina eo an-tampon'ny andry telo lehibe:
Midira amin'ny resadresaka izay zava-dehibe - Ny mpitantana ny vondrom-piarahamonina, fantatra ihany koa amin'ny hoe admin, no ivon'ny tetikady ara-tsosialin'ny fikambanana. Manome azy ireo ny fitaovana ilain'izy ireo ny pejy mba hampiroboroboana ny fifandraisana isan'andro amin'ny fiarahamonina misy azy ireo. Amin'izao fotoana izao dia afaka mandefa fanavaozana ny admin ary mamaly ny hevitr'izy ireo, eo am-pandehanana avy amin'ny fampiharana finday LinkedIn ho an'ny iOS sy Android. Ny admin dia afaka mampifandray ny pejiny amin'ny tenifototra ihany koa, mba hahafahan'izy ireo mihaino sy mamaly ireo resaka mitranga momba ny marika na lohahevitra mifandraika amin'izany ao amin'ny LinkedIn. Ankoatr'izay, raha nanana fahaizana mandefa sary, horonan-tsary ary lahatsoratra an-tsoratra hatrany amin'ny pejin'ireo orinasa LinkedIn ireo admin, dia afaka mizara antontan-taratasy sahala amin'ny fampisehoana PowerPoint, Word Documents ary PDF izy ireo hilazana tantara marika manankarena sy mahasarika kokoa.
Fantaro ary hitombo ny mpihaino anao - Ny iray amin'ireo fanamby lehibe indrindra ho an'ny admin dia ny fahafantarana hoe inona ny karazana atiny izay hanome lanja ny vondrom-piarahamonin'izy ireo, raha tsy izany dia mety hianjera ny lahatsoratr'izy ireo. Nanangana izahay Soso-kevitra avy any anatiny, fisehoan-javatra vaovao iray izay mivoaka amin'ny lohahevitra sy ny atiny mirona miaraka amin'ny mpihaino kendrena azy ao amin'ny LinkedIn. Miaraka amin'ireto fomba fijery ireto, ny admin dia afaka manamboatra sy mamorona atiny izay azo antoka fa hiarahan'ny mpihaino azy. Ireo mpampiasa dia afaka mandray ny talenta marika amin'ny ambaratonga manaraka miaraka amin'ny Career Pages, izay manome anao ny safidy hampidirana talenta ankehitriny sy mety amina tabilao Life ary a Salan'asa, izay manome fijery namboarina momba ny kolontsain'ny orinasanao, ny asa ary ny hoe ahoana ny fiasana amin'ny orinasanao.
Ampandraiso anjara ny Vahoakanao - Ny mpiasan'ny orinasa no fananany lehibe indrindra ary afaka ny ho mpiaro azy ireo lehibe indrindra. Ny fanamafisana ny feon'izy ireo dia afaka manampy ireo fikambanana hanangana fifandraisana matanjaka amin'ny mpihaino azy ireo. Faly izahay fa manambara karazana fitaovana iray hanampiana ireo fikambanana hikaroha ny olony amin'ny alàlan'ny fampahafantarana ny fahafaha-mahita sy mamerina mamoaka ny lahatsoratr'ireo mpiasan'ny daholobe ampiasain'ny LinkedIn ao amin'ny Pejiny. Navoakantsika ihany koa ny fahafaha-mamaly sy mizara indray ireo lahatsoratra rehetra ao amin'ny LinkedIn izay tononina ny Pejin'ny orinasa iray, toy ny fijoroana vavolombelona nataon'ny mpanjifa sy ny hevitry ny vokatra. Io dia ahafahan'ny orinasa mampiseho ny resadresaka ifanaovan'ny olona momba azy ireo, ary afaka manampy ny marika hiavaka eo ambonin'ny vahoaka.
Midira pejy avy amin'ireo fitaovana tianao indrindra
Nanatsara ny API mpiara-miasa aminy ny LinkedIn mba hanamorana ny fidiran'ny admin amin'ny resaka amin'ny LinkedIn amin'ny alàlan'ny API. Ohatra, amin'ny alàlan'ny fampidirana vokatra miaraka amin'ny Hootsuite, ny admin ankehitriny dia afaka mahazo fampandrenesana ao anatin'ny Hootsuite rehefa misy hetsika ao amin'ny pejy LinkedIn.
Miaraka amin'ny mpampiasa matihanina maherin'ny 590 tapitrisa, LinkedIn dia toerana voalohany ahafahan'ny marika mifandray amin'ny mpanjifa, ny mpiasa ary ny prospect. Faly izahay fa ho vahaolana voalohany amin'ny fitantanana haino aman-jery sosialy hananganana API fampandrenesana vaovao an'i LinkedIn mba hahafahan'ny mpanjifanay mitondra fiara amin'ny LinkedIn. Ryan Holmes, CEO & mpanorina ny Hootsuite
Niara-niasa tamin'ny LinkedIn koa ny LinkedIn Crunchbase hanasongadinana fomba fijery ara-bola sy mpamatsy vola lehibe ao amin'ny pejy LinkedIn, manome ny mpikambana ao amin'ny LinkedIn fahatakarana bebe kokoa momba ny mombamomba ny orinasa iray.
Raha te hahalala bebe kokoa momba ny Pejy LinkedIn sy ny fomba hampandeha azy ireo hiasa amin'ny fikambanananao, tsidiho azafady. LinkedIn dia nanomboka nanala ny traikefa pejy vaovao tany Etazonia ary hametraka izany ho an'ny orinasa rehetra manerantany mandritra ny herinandro ho avy.
Tags: LinkedInPejy misy ifandraisanymombamomba ny orinasa LinkedInPejy misy ifandraisanypejy linkin